Princeton University - Study in USA. Fampianarana an-tany hafa Magazine
fanafohezan-teny : Pu
Créé : 1746
mpianatra (eo ho eo.) : 8000
Aza adino ny miresaka momba Princeton University
Misoratra anarana ao amin'ny Oniversiten'i Princeton
Princeton University dia miankina andrim-panjakana izay naorina tamin'ny 1746.
Ny saram-pianarana any Princeton University dia $45,000 (Aprox.).
Princeton, ny fahefatra-oniversite tranainy indrindra ao amin'ny United States, dia miorina ao amin'ny mangina tanànan'i Princeton, New Jersey. Ao anatin'ny rindrin'ny ny tantara Ivy-rakotra fonenan'ny mpianatra, Princeton manolotra maro ny zava-nitranga, asa sy ny fikambanana. The Princeton Tigers, mpikambana ao amin'ny Ivy League, tsara fantatra noho ny tsy tapaka ny lehilahy matanjaka sy ny vehivavy ny ekipa lacrosse. Mpianatra miaina amin'ny iray amin'ireo enina fonenana kolejy izay manome ny trano fonenan'ny fiaraha-monina ary koa ny asa fisakafoana fa hanana ny safidy mba hiaraka iray mahery 10 mihinana fikambanana noho ny zandriny sy ny zokiolona taona. Ny mihinana fikambanana manompo toy ny ara-tsosialy sy fisakafoana fikambanana ho an'ny mpianatra izay hiaraka amin'izy ireo. Princeton ny teny filamatra ofisialy, “Ao amin'ny firenena ny Fanompoana sy ny fanompoana ny Firenena Rehetra,” miresaka amin'ny oniversite ny fanoloran-tena ny fiaraha-monina ny fanompoana.
Princeton nahazo diplaoma dia ahitana ny tena laharana fandaharana ny alalan 'ny Woodrow Wilson Sekoly Public sy Raharaha Iraisam-pirenena sy ny Sekolin'ny injeniera sy Applied Siansa. Iray tsy manam-paharoa lafiny akademika Princeton ny fandaharana dia ny hoe ny mpianatra rehetra no takiana undergraduate hanoratra ny zokiny thesis. Malaza Alumni ahitana U.S. Filoha Woodrow Wilson; John Forbes Nash, foto-kevitra ny 2001 horonan-tsary “A Beautiful Mind”; modely / mpilalao sarimihetsika Brooke Shields; ary ny voalohany ramatoa Michelle Obama. Araka ny Princeton angano, Raha misy mpianatra fivoahana toeram-pianarana amin'ny alalan'ny FitzRandolph Gate talohan'ny diplaoma, dia mety ho voaozona tsy mba diplaoma.
Princeton University dia mihetsiketsika fiaraha-monina ny vatsim-pianarana sy ny fianarana izay mijoro ao amin'ny firenena ny asa fanompoana sy ny asa fanompoana amin'ny maha-olombelona. nanofa in 1746, Princeton no fahefatra-oniversite tranainy indrindra ao amin'ny United States. Princeton dia tsy miankina, coeducational, nondenominational fikambanana izay manome undergraduate sy diplaoma fampianarana ao amin'ny humanities, siansa ara-tsosialy, voajanahary siansa sy ny injeniera.
Amin'ny maha-izao tontolo izao-malaza fikarohana oniversite, Princeton mikatsaka ny hahatratra ny ambaratonga ambony indrindra ny fanavahana ao ny nahitana sy ny fandefasana ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina. Mandritra izany fotoana izany, Princeton dia miavaka amin'ny fikarohana oniversite amin'ny fanoloran-undergraduate fampianarana.
ankehitriny, mihoatra ny 1,100 mpikambana ao amin'ny sampam-pianarana mampianatra eo ho eo 5,200 undergraduate mpianatra ary 2,600 nahazo diplaoma ireo mpianatra. Ny University fanampiana ara-bola ny malala-tanana no miantoka fa manan-talenta fandaharana ireo mpianatra avy amin'ny fiaviana ara-toekarena rehetra mety takatry ny volany ny Princeton fampianarana.
Princeton University mandroso ny fianarana amin'ny alalan'ny vatsim-pianarana, fikarohana, sy fampianarana ny toetra manan-tsahala, miaraka amin'ny fanindriana ny undergraduate sy doctorat fanabeazana izay miavaka eo amin'izao tontolo izao ny anjerimanontolo lehibe, ary amin'ny niely be fanoloran-tena hanompo ny firenena sy izao tontolo izao.
Ny University ny mamaritra ny toetra sy ny hetaheta dia ahitana:
ny fifantohana amin'ny zavakanto sy ny humanities, ny siansa sosialy, siansa momba ny zavaboary, ary ny injeniera, amin'ny izao tontolo izao-kilasy tsara manerana ny departemanta rehetra;
ny fanoloran-tena ho zava-baovao, maimaim-poana nanontany, ary ny nahitana ny vaovao fahalalana sy hevi-baovao, miaraka amin'ny fanoloran-tena mba hiarovana sy mamindra ny ara-tsaina, kanto, ary ny ara-kolontsaina lova ny lasa;
ny fahaizana ny izao tontolo izao-kilasy manam-pahaizana izay nirotsaka tamin'ny sy azon'ny mpianatra sy voatokana ny lalina fampidirana ny fampianarana sy ny fikarohana;
ny fifantohana amin'ny fianarana undergraduate izay manam-paharoa ho an'ny fikarohana lehibe oniversite, amin'ny fandaharam-liberaly kanto izay niara-Manomana ireo mpianatra ho an'ny fiainana sy ny asa manan-danja, Mampivelatra ny toe-tsain'izy, ary manampy mamorona ny tarehin-tsoratra sy ny soatoavina;
nahazo diplaoma sekoly izay tsy mahazatra ao amin'ny fanantitranterany ny doctorat fanabeazana, koa raha fanatitra avo lenta tompony fandaharana ao amin'ny faritra voafantina;
olombelona ambaratonga izay hakingan-tsaina mafy ny fiaraha-monina, manasa avo tahan'ny ny andraikitra, ary Mamporisika mba fifandraisana manokana;
miavaka mpianatra fanampiana fandaharana amin'ny undergraduate sy nahazo diplaoma ambaratonga izay miantoka Princeton dia takatry ny rehetra;
ny fanoloran-tena mba handray, fanohanana, ary manao mpianatra, sampam-pianarana, ary ny tehinao, malalaka isan-karazany ny fiaviana sy ny zavatra niainana, ary Mampahery ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina University mba hianatra avy amin'ny matanjaka fanehoana fomba fijery isan-karazany;
ny toeram-ponenana immersive mavitrika sy traikefa eo amin'ny toeram-pianarana miaraka amin'ny fahatsapana miavaka toerana izay mampiroborobo ny fifandraisana, taratra, ary mandritra ny fiainana miraiki-po;
ny fanoloran-tena mba hanomana ireo mpianatra ho an'ny ain'ny fanompoana, olom-pirenena andraikitra, sy ny etika mpitarika; ary
ny anjara-kafanam-po sy malala-tanana nanohana Alumni fiaraha-monina.
Applied sy ny kajy amin'ny solosaina, Math
Art sy ny Arkeolojia
Simika sy biolojika Engineering
Frantsay sy italiana
Fitaovana Science Joint Ph.D. Degree Program
Moyen Âge Studies
Music (Music Firafitra)
Neuroscience Ph.D. mpiara Degree
Asa Research and Financial Engineering
Hamaroan'isa sy kajy amin'ny solosaina, Biologie
Renaissance sy ny fiandohan'ny Modern Fianarana
1696 Town ny Princeton nanorim-ponenana.
1746 College of New Jersey nanangana in Elizabeth, N.J., ny Presbyterianina Synoda.
1747 Jonathan Dickinson nanendry filoha voalohany. College hetsika ho an'ny Newark parsonage Arona Burr Sr., taorian'ny nahafatesan'i Dickinson.
1748 Aaron Burr Sr. voafidy ny filoham-pirenena faharoa College. Ny ankehitriny Sata ao New Brunswick nomena, N.J.. Voalohany Fiantombohan'ny fanazaran-tena natao, amin'ny enina undergraduate nahazo diplaoma.
1753 Nathaniel sy Rebeckah FitzRandolph sy ny hafa atao 10 hektara any Princeton amin'ny College.
1756 Nassau Hall sy Maclean House (ny filoha an-tranon'ny) vita ny; College of New Jersey Manosika avy any Newark ho any Princeton.
1758 Jonathan Edwards lasa filoha fahatelo.
1759 Samuel Davies nametraka ho filoha fahefatra.
1761 Samuel Finley lasa filoha fahadimy.
1768 Rev. John Witherspoon ny Ekosy fahenina nametraka ho filoha.
1769 Malagasy Whig miady hevitra Society niforona.
1770 Cliosophic miady hevitra Society niforona.
1776 Filoha Witherspoon signe ny Fanambarana ny Fahaleovan-tena.
1777 George Washington mitarika ny Britanika avy any Nassau Hall.
1783 Continental Kongresy mihaona in Nassau Hall, izay nanompo tahaka ny Capitol ny Etazonia tamin'ny Jona hatramin'ny Novambra.
1795 Samuel S. Lasa filoha Smith fahafito.
1802 Nassau Hall gutted ny afo sy nanorina indray.
1812 Asbela Green nametraka toy ny fahavalo filoha.
1823 James Carnahan lasa filoha fahasivy.
1826 James Madison, kilasy 1771 sy ny filoha teo aloha 'ny United States, Lasa voalohany Alumni filohan'ny Fikambanan'ny ny College ao New Jersey.
1854 John Maclean Jr. nametraka ho filoha faha-10.
1855 Nassau Hall gutted amin'ny afo indray, ary nanorina indray indray.
1859 Alma Mater "Old Nassau" nosoratan'i Harlan Page Peck (kilasy 1862).
1868 James McCosh ny Ekosy voafidy filoham-pirenena faha-11.
1869 Princeton mitendry Rutgers University ao amin'ny oniversite voalohany lalao baolina kitra.
1876 Ny mpianatra Princetonian gazety no navoaka voalohany (Mbola namoaka isan'andro ny mpianatra nandritra ny taona akademika).
1882 Princeton University Art Museum nanorina.
1883 Triangle Club (am-boalohany hoe ny Princeton College Tsinjo Association) nanorina.
1888 Francis L. Patton Lasa filoha faha-12.
1893 Honor rafitra niorina.
1895 A nahazo diplaoma diplaoma (ny Tompon'ny Arts) dia nahazo ny mpianatra mainty hoditra voalohany.
1896 Name fomba ofisialy niova ho Princeton University. Dia Woodrow Wilson-mpampianatra dia manome Princeton ny tsy ara-potoana teny filamatra amin'ny teny mitondra ny lohateny hoe “Princeton ao amin'ny firenena ny Service.”
1900 Graduate School nametraka.
1902 Woodrow Wilson, kilasy 1879, voafidy filoham-pirenena faha-13.
1905 Filoha Wilson no mametraka rafitra ny preceptorials.
1906 Lake Carnegie noforonin'i Andrew Carnegie.
1912 John G. Hibben nametraka ho filoha faha-14.
1913 Notokanana nahazo diplaoma College.
1914 Palmer Stadium vita.
1919 Sekoly niorina maritrano. Princeton Tafik'i ROTC rafitra niorina.
1921 Sekoly niorina ny Engineering.
1928 Princeton University Chapel Notokanana.
1930 Sekolin'ny Public Affairs naorina sy Iraisam-pirenena (ary atao hoe taorian'ny Woodrow Wilson in 1948).
1933 Harold W. Dodds Lasa filoha faha-15. Albert Einstein fiainana lasa mpikambana ao amin'ny Institute for Advanced Fianarana, miaraka amin'ny birao ao amin'ny Anjerimanontolon'i Princeton toeram-pianarana.
1940 Undergraduate radio (Ary WPRU, ankehitriny WPRB) nanorina.
1942 Ny mainty hoditra voalohany undergraduate mpianatra dia niaiky.
1948 Library Firestone Notokanana.
1949 Association ny Graduate Princeton Alumni nanorina.
1951 Forrestal Campus napetraka tamin'ny U.S. Route 1; “Project Matter-tandroka” fikarohana in nokleary Fusion manomboka any. In 1961, dia niova ny anarany any amin'ny Princeton betsaka ao amin'ny plasma Physique Laboratory (PPPL).
1954 Ivy League fanatanjahan-tena amin 'ny Conference nanorina, amin'ny Princeton ho iray amin'ireo valo mpikambana.
1957 Robert F. Goheen nametraka ho filoha faha-16.
1960 Martin Luther King Jr. mitory any amin'ny Oniversiten'i Chapel. Nassau Hall heverina-pirenena manan-tantara iray nanan-tantara.
1964 Ph.D. nahazo diplaoma ny vehivavy no ho an'ny voalohany.
1969 Mpitandrim-pananana mifidy ny hanaiky ny vehivavy undergraduates.
1970 Filan-kevitra ao amin'ny Oniversiten'i Princeton Community (CPUC), ny fandinihana vatana ny sampam-pianarana, mpianatra, mpiasa sy ny Alumni, nampitoerina.
1971 Fahatelo World Center nanorina (in 2002, anarana ny Carl A. Fields Center for Fitoviana sy ara-kolotsaina hahazoana hevi-javatra, taorian'ny Afrikana Amerikana mpanampy ny mpiandraikitra ny kolejy avy 1968-71). Vehivavy Center naorina.
1972 Marina G. Bowen Lasa filoha faha-17.
1974 International Center (ankehitriny ny Davis International Center) nanorina.
1982 System ny fonenana kolejy niorina.
1988 Harold T. Shapiro nametraka ho filoha faha-18.
1994 Center for Life Jiosy nanorina.
1996 250tsingerintaona faha-Nankalaza. Princeton ny tsy ara-potoana teny filamatra nivelatra Filoha Shapiro ho “Ao amin'ny firenena ny Fanompoana sy ny fanompoana ny Firenena Rehetra.”
1998 Voalohany dingana lehibe nanoratra overhaul fanampiana ara-bola ny politika, fanaovana Princeton takatry more.
2000 Graduate School mankalaza faha-100 taonan'ny.
2001 Shirley M. Tilghman Lasa filoha faha-19. “No-bola” fanampiana ara-bola politika - fanoloana fampindramam-bola amin'ny Grants izay tsy mila no havaly - dia nanorina.
2003 Lewis-Sigler Institute for Integrative Fandinihana ny fototarazo natokana amin'ny andraikitra mba hifantoka amin'ny fikarohana sy ny fampianarana ao amin'ny interface tsara ny zavamananaina sy ny hamaroan'isa siansa. Princeton Loka in Foko Fifandraisana nanorina hampiroborobo ny fahatakaran-javatra eo amin'ny lise-taona ireo mpianatra.
2005 Princeton Neuroscience Institute, Princeton Center for teorika siansa sy ny Foibe ho an'ny Fanavaozana in Engineering Fanabeazana (anarana ny Keller Center for Fanavaozana in Engineering Education in 2008) niorina. Center LGBT nanorina.
2006 University Center for ny Creative sy Nanao Zavakanto (anarana ny Peter B. Lewis Center ho an'ny Arts in 2007) ary ny fampandrosoana maharitra Office niorina. African American Center for Fianarana niorina, fanitarana fandaharana nanomboka tamin'ny 1969.
2007 Efa-taona toeram-ponenana rafitra oniversite nanomboka tamin'ny fanokafana ny Whitman College.
2008 Andlinger Center for Angovo sy ny tontolo iainana naorina. Lewis Library, natao ny Frank Gehry sy manamafy siansa rakitra, vita ny.
2009 Bridge Taona Program manomboka amin'ny 20 mpianatra deferring fieken-keloka ho an'ny herintaona ny iraisam-pirenena anjara amin'ny fanompoana. Butler College reopens amin'ny dormitories vaovao, vita ny University ny tetezamita ny efa-taona oniversite toeram-ponenana rafitra.
2010 Frick Simia Laboratory, ny lehibe indrindra amin'ny trano tokana toeram-pianarana akademika manavaka Firestone Library, manokatra; Streicker Bridge Manokatra, mampifandray ny lafiny roa amin'ny siansa manodidina manerana an'i Washington Road.
2012 A dimy taona fampielezan-kevitra, “hiandrandra: A Plan for Princeton,” mamarana eo ambany Filoha Shirley M. Tilghman, rehefa avy ny fitaizana $1.88 lavitrisa.
2013 Christopher L. Lasa Eisgruber Princeton ny filoha faha-20.
2014 Fanokafana ny Peretsman Scully Hall, ny vaovao an-trano ny Departemantan'ny Psychology, ary ny Princeton Neuroscience Institute.
Ianao ve mila miresaka momba Princeton University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Princeton University ao amin'ny Map
Photos: Princeton University ofisialy Facebook
Princeton University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Princeton University.
Oniversiten'i Chicago Chicago